Lifetime Achievement Awards နှင့်အတူ Alan Heim၊ ACE နှင့် Randy Roberts တို့၏ ACE တို့ကိုဂုဏ်ပြုသည့် Hollywood Post Alliance | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ဂုဏ်ပြုအလန် Heim, ACE အားနှင့်တစ်သက်တာအောင်မြင်မှုဆုပေးပွဲနှင့်အတူ Randy Roberts သည်, ACE အားမှဟောလိဝုဒ် Post ကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့
ဂုဏ်ပြုအလန် Heim, ACE အားနှင့်တစ်သက်တာအောင်မြင်မှုဆုပေးပွဲနှင့်အတူ Randy Roberts သည်, ACE အားမှဟောလိဝုဒ် Post ကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့
အဖွဲ့အစည်းကအလွှမ်းမိုးအယ်ဒီတာများ၏ Careers နှင့်အလှူငှမြေားသိလိမျ့မညျ
(Los Angeles မြို့,, CA) က ဟောလိဝုဒ် Post ကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ (r) (HPA) အလန် Heim, ACE အားနှင့် Randy Roberts သည်, ACE အားတစ်ဦးချင်းစီအဖှဲ့အစညျးရဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ထူးတဦးသည်တစ်သက်တာအောင်မြင်မှုဆုချီးမြှင့်ခံရကြလတံ့ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ ဒါရိုက်တာ၏ HPA ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်တစ်ဦးကိုရွေးချယ်ကော်မတီသည်ကဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အထူးဆု, အဘယ်သူ၏ post ကိုထုတ်လုပ်မှု၏လယ်ပြင်ပံ့ပိုးမှုများကိုသိသိသာသာရှိပါတယ် honorees မှပေးအပ်လျက်ရှိသည်။ Heim နှင့်ရောဘတ်မှာသူတို့ရဲ့ဆုလကျခံဖို့လက်ပေါ်ပါလိမ့်မည် 9th နှစ်ပတ်လည် HPA ဆုပေးပွဲ အတွက် Skirball ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ၌နိုဝင်ဘာလ 6, 2014 ပေါ်တွင်ပြရန် Los Angeles မြို့, CA.
လီယွန် Silverman သည် HPA ၏သမ္မတ, အယ်ဒီတာများနှင့် post ကိုထုတ်လုပ်မှုအသိုင်းအဝိုင်းအခြားအဖွဲ့ဝင်များအကြားချည်နှောင်ခြင်းကိုအများဆုံးစည်းနှောင်အကြားရှိပါတယ် "ဟုပြောသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှု, အပျနှံနှင့်ဝန်ဆောင်မှု၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်ပေးထားသောဤဆုနှင့်အတူနှစ်ခုအံ့သြစရာယောက်ျား၏အလုပ်ဆင်နွှဲဖို့ဂုဏ်အသရေဖြစ်၏။ အလန်နှင့် Randy နှစ်ဦးစလုံးစက်မှုလုပ်ငန်းအကူးအပြောင်း၏ဤစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချိန်ကာလအတွင်းအယ်ဒီတာအဖွဲ့၏အခန်းကဏ္ဍကိုမှအသိပညာနှင့်ရိုသေလေးစားမှုဆောင်ခဲ့အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ရုံအယ်ဒီတာများ၏ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြပါပြီ။ ထို့အပြင်မိမိတို့ကြိုးစားအားထုတ်မှုများနှင့်အပျနှံမှတဆင့်တည်းဖြတ်၏အနုပညာနှင့်ယာဉ်ရန်အရေးကြီးပါသည်ပံ့ပိုးမှုများကိုစေပြီ။ ဒီဆုချီးမြှင့်သူတို့နှင့်အတူအသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါလိမ့်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂုဏ်အသရေဖြစ်၏။ ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အခန်းကဏ္ဍထဲမှာရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာ ACE အားအတူ HPA ရဲ့ပူးပေါင်း Randy နှင့်အလန်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြဂုဏ်ပြုခဲ့ကြသည်။ ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါ့ကိုရန်နှင့် HPA မှဤမျှလောက်ဆိုလိုတာကအဲဒီလူနှစ်ယောက်ကဒီဆုချီးမြှင့်ပေးဖို့ပိုပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နိုင်ဘူး။ "
အလန် Heim, ACE အား
HPA တစ်သက်တာအောင်မြင်မှုဆုချီးမြှင့်လက်ခံရရှိသူအလန် Heim, ACE အားသူ၏ခရက်ဒစ်နှင့်ဆု feature ကိုရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြား span တစ်ဇာတိ New Yorker ဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းသူ့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်သူသည်အများသောရုပ်မြင်သံကြားပေါ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့နောက်ဆုံးမှာအဆိုပါထုတ်လုပ်သူများ၏မူရင်းဗားရှင်းပေါ် Pawnbroker နှင့် The Group မှအပါအဝင်ရုပ်ရှင်၏နံပါတ်ပေါ်နှင့် Mel Brooks နှင့်အတူ Sidney Lumet အတူလုပ်ကိုင်တစ်သံကိုအယ်ဒီတာအဖြစ်ပြသထားတယ်။ ထို့အပြင်သူသည်ပေါလုကို Newman ကန့်ရာခေလသည်ရာခေလပေါ်မှာဂီတအယ်ဒီတာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်သူမတစ်ဦးကလေးနှင့် Funny လယ်ယာရှိခြင်းရဲ့ရုပ်ပုံအယ်ဒီတာဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့် Lumet များအတွက်ပင်လယ်ပြင် Gull, Brooks နှင့်အတူဆယျ့နှစျသဘာပတိနှင့် Godspell အပါအဝင်များစွာသောအခြားစီမံကိန်းများ, edited ။ Heim ဘော့ FOSS ဒါရိုက်တာတစ်ဦး Z ကို, အတူလီဇာတစ်ခုသူဟာ Emmy (r) အတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Lenny, အားလုံးဒါကဂျက်ဇ်ဂီတနှင့်စတား 80: သုံးခုရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးပူးပေါင်း၏အစအဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ Heim အားလုံးဒါကဂျက်ဇ်ဂီတတစ်ခုအော်စကာ (r), BAFTA နှင့် ACE အား Eddie ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူလည်းသူသည်နောက်တဖန်တစ်ဦးအော်စကာများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့သည့်အဘို့အ Lumet များအတွက်ကွန်ယက်, edited ။ Heim သူအမေရိကန်သမိုင်း X ကိုက The Notebook နှင့် Alpha ခွေးအပေါ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘယ်မှာ 1994 အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los angle သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Heim အဆိုပါ miniseries မီးလောင်တိုက်သွင်းတည်းဖြတ်တစ်ခုသူဟာ Emmy အနိုင်ရနှင့်ဒေါ်ရသီ Dandridge နှင့် Grey ကဥယျာဉ်မိတ်ဆက်ခြင်းများအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည်လက်ရှိတွင် ACE အားနှင့် Motion Picture အယ်ဒီတာများအစည်းအရုံးနှစ်ဦးစလုံး၏ဥက္ကဌဖြစ်သည်။
Heim ငါ Moviola အပေါ်တည်းဖြတ်ရန်သင်ယူ "commented ထို့နောက် Kem နှင့် Steenbeck နှင့်အခြားအသျှင်စက်မှုစနစ်များနှင့်တည်းဖြတ်တဲ့အခန်း impact သောနည်းပညာများကိုချီတက်ကြသူလူများအများအပြားနှင့်အတူတွေ့ဆုံအချို့နှစ်ပေါင်းကုန်ရပြီ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်အကြီးပုံပြင်များပြောပြမှဝန်ဆောင်မှု၌ရှိကြ၏။ MPEG နှင့် ACE အား - - ငါသည်ငါ့အသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခွင့်ထူးခံဖြစ်ရပြီနှင့်အလုပ်ငါ့ကိုရန်အလွန်အရေးကြီးသောဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ပို့စ်ထုတ်လုပ်မှုအသိုင်းအဝိုင်း၌ငါ့ရွယ်တူချင်းမှဤဆုချီးမြှင့်ခံရဖို့အလွန်အဓိပ္ပါယ်ရှိသော, ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အသိအမှတ်ပြုမှုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတန်ဖိုးထားဖြစ်ပါတယ်။ "
Randy Roberts သည်, ACE အား
Honoree Randy Roberts သည်, ACE အားနီးပါးဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုအဘို့အဆုပ်အနစ်အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ရုံအယ်ဒီတာများတာဝန်ထမ်းဆောင်တော်မူပြီ 1996 ကတည်းကဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်, 2005-2008 ထံမှဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်, 2008-2012 ကနေသမ္မတဦးသိန်းစိန်ကဲ့သို့၎င်း, လက်ရှိစျေးကွက်၏အဖှဲ့အစညျးရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ်။ ရောဘတ် EditFest ၏မူလတဦး, ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ရေး၏အနုပညာနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမီးမောင်းထိုးပြကြောင်းတည်းဖြတ်ရေးပွဲတော်များတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ သူအဖှဲ့အစညျး၏အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နည်းပညာသူတို့ရဲ့ field ရဲ့ထိပ်မှာရှိနေဆဲဆိုတာသေချာကူညီရန် ACE အား Tech မှနေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ Burbank ကယ်လီဖိုးနီးယားအတွက်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းသို့မွေးဖွားခဲ့ပြီးရောဘတ်သည်သူ၏လူငယ်စဉ်အတွင်းရုပ်ရှင်များ, တီဗီရှိုးများနှင့်ကြော်ငြာများတွင်အခန်းကဏ္ဍများစွာနှင့်အတူကင်မရာများ၏ရှေ့မှောက်၌သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတော့သူ Warner Bros. နှင့်ပြည်ထောင်စုနဲ့အလုပ်သင်မှာရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဦးစီးဌာနသို့သူ၏လမ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ၏ပထမဦးဆုံးအင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ရေးအကြွေးအမည်အားအနည်းငယ်မှ Francis က Ford ကား Coppola (နှလုံးကနေတစျခု) ဖြင့်စီမံကိန်းများ, ရောဘတ်အီဗန် (ကစားသမား), ဒါဝိဒ်သည်အီးကယ်လီနဲ့ဒစ်ခ် Wolf ကကနောက်တော်သို့လိုက်ရစ်ချတ် Pryor ရဲ့အမဲဆီ Lightning ပေါ်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Duty ၏ချီကာဂိုမျှော်လင့်ချက်, LA ကဥပဒေ, အဆိုပါအေဂျင်စီနှင့်ခရီးစဉ်များပါဝင်သည်အရာသည်သူ၏ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားတည်းဖြတ်ရေးခရက်ဒစ်, အပြင်, Roberts သည် '' အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလည်းကွန်ရက်ကရုပ်မြင်သံကြား၏ဖြစ်စဉ်များ၏နံပါတ် directing ပါဝင်သည်ထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးချစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းအခန်းထဲမှာကျန်ရစ်၏။ အထူးခံရသူယူနစ်: သူကတာရှည်-running hit စီးရီးဥပဒေနှင့်အမိန့်အပေါ်ထုတ်လုပ်သူကြီးကြပ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင်သည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်နေခဲ့ရသည်။ သူကတစ်ဦး ACE အား Eddie Award ဆုရှင်နှင့်ဆန်ခါတင်တစ် Primetime သူဟာ Emmy Award ဆုဆန်ခါတင်နှင့်အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ရုံအယ်ဒီတာ့အမွေအနှစ်ဆုချီးမြှင့်ရဲ့စာကိုလက်ခံရရှိသူဖြစ်ပါတယ်။
ဂုဏ်ပြုခံရခြင်း၏, Roberts သည်အစဉ်အမြဲငါသိအကြီးမြတ်ဆုံးလူတခြို့နဲ့အလုပ်လုပ်, အသက်ရှင်ခြင်းသို့ပုံပြင်များ coaxing, ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်မရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းငါ့အသက်ကိုတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုပြောသည်။ ငါ post ကိုထုတ်လုပ်မှုရပ်ရွာထဲတွင်ဤမျှလောက်များစွာသောလူများနှင့်ကုမ္ပဏီကြီးများ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပါဝင်မှုခံစားခဲ့ကြ, ထိုသို့တသမတ်တည်းတို့သည်ကြီးစွာသောမိတ်ဖက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ HPA မှာသူငယ်ချင်းတွေဆီကနေဒီဆုလက်ခံရရှိရန်နူးအားရဖှယျသည်နှင့်ငါ့ထံသို့ကမ္ဘာကြီးကိုဆိုလိုသည်။ ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျေးဇူးတင်တယ်, ဒါပေမယ့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အယ်ဒီတာများ၏မယုံနိုင်လောက်အောင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍအသိအမှတ်ပြုဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ "
အဆိုပါတစ်သက်တာအောင်မြင်မှုဂုဏ်ထူး, 12 ယာဉ်အမျိုးအစားများအတွက်ဆုရရှိသူအပြင်, တီထွင်ဖန်တီးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, နှင့်အင်ဂျင်နီယာ Excellence Award ဆုကိုများအတွက်အထူးဆုနိုဝင်ဘာလ 6th အပေါ် HPA ဆုပေးပွဲ Gala မှာ၏အကြောင်းလိမ့်မည်။
အဆိုပါ 9th နှစ်ပတ်လည် HPA ဆုပေးပွဲများအတွက်လက်မှတ်များကို (ယခုရရှိနိုင်ပါTICKETS) ။ လက်မှတ်ဝယ်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများ + 1 (213) 614.0860 မခေါ်သို့မဟုတ်ထံစာရေး [အီးမေးလျ protected]။ စာနယ်ဇင်းမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များခရစ္စပိုက်ဆံအိတ်သို့မဟုတ် Mimi ရော့စီစက်နှိုးမှာ 818.980.3473 သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ညွှန်ကြားရပါမည် [အီးမေးလျ protected].
အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အဘို့, သူ Alicia ရော့ခ်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်, [အီးမေးလျ protected] သို့မဟုတ် + 1 (213) 614.0860 ခေါ်ဆိုပါ။ အဆိုပါ 2014 HPA ဆုပေးပွဲများအတွက်စပွန်ဆာအခွင့်အလမ်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, Garrett Randall ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် [အီးမေးလျ protected], ဒါမှမဟုတ် + 1 (310) 882.9204 ခေါ်ဆိုပါ။
ယင်းအကြောင်း ဟောလိဝုဒ် Post ကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ (r)
ဟောလိဝုဒ် Post ကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့ (HPA) ကျွမ်းကျင်မှု, ထောက်ခံမှု, ကိရိယာများနှင့်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများ, ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာ, ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာနှင့်အခြားပြောင်းလဲနေသောမီဒီယာအကြောင်းအရာ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ပြီးများအတွက်အခြေခံအဆောက်အဦများကိုအဘယ်သူသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသိုင်းအဝိုင်းဆောင်ရွက်ပါသည်။ Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏အသငျး (r) (နှင့်အတူ၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်မှတဆင့်SMPTE(r)), အပုံရိပ်, အသံ, နှင့် metadata ဂေဟစနစ်၏အနုပညာ, သိပ္ပံနှင့်ယာဉ်များ၏တိုးအတွက်ခေါင်းဆောင်သည် HPA ကကိုယ်စားပြုသည်ရပ်ရွာ၏၎င်း၏ထောက်ခံမှုတိုးချဲ့နေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါ HPA အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်မှာရရှိနိုင် ww.hpaonline.com.
အဆိုပါ HPA (r) ဆုပေးပွဲအကြောင်း
အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲ, post ကိုထုတ်လုပ်မှု၏အသိအမြင်များကိုထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖန်တီးမှုနှင့်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထူးချွန်မြှင့်တင်ရန်, post ကိုထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်၏အောင်မြင်မှုများကိုအသိအမှတ်မပြု, နှင့်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုတည်ဆောက်ဖန်တီးခဲ့ကြ ဟောလိဝုဒ် Post ကိုမဟာမိတ်အဖွဲ့။ အဆိုပါ HPA (Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏အသငျး (r) ၏မိတ်ဖက်ဖြစ်ပါသည်SMPTE(r)) ။ အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြန်ကြားရေးမှာရရှိနိုင် ww.hpaonline.com။ အဆိုပါ HPA ဆုပေးပွဲ Foundation မှအဖွဲ့ဝင်များအနေဖြင့်ရက်ရက်ရောရောပံ့ပိုးမှုဖြင့်တင်ပြပါမည်: လွန်စွာလိုလားသော နှင့် Dolby Laboratories စပွန်ဆာပံ့ပိုး: အဆိုပါ ဟောလိဝုဒ် သတင်းထောက်နှင့် Mesa ။
ခရစ္စပိုက်ဆံအိတ်, [အီးမေးလျ protected] or
Mimi ရော့စီ, [အီးမေးလျ protected]
Sohonet ၏ ClearView Flex သည် HPA ၏ ၂၀၂၀ အင်ဂျင်နီယာထူးချွန်ဆုအတွက်ဂုဏ်ထူးဆောင်ဖော်ပြခြင်းကိုလုံခြုံစေသည် - စက်တင်ဘာလ 18, 2020
၂၀၀၀ HPA ဆုပေးပွဲအတွက် Engineering Excellence Recipients ကိုကြေငြာခဲ့သည် - စက်တင်ဘာလ 17, 2020
၂၀၂၁ လူငယ်ဖျော်ဖြေရေးပညာရှင်များအတန်းအစားအတွက် HPA ဖွင့်လှစ် - စက်တင်ဘာလ 15, 2020
ကြော်ငြာ အကြောင်းအရာ ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ အယ်ဒီတာ ဖားအံဆု ရုပ်ရှင် ရုပ်မြင်သံကြား 2014-10-22
ယခင်: sporty, သို့သျောလညျးစတိုင်: အသံလွှင့်အားကစားပွဲများ
နောက်တစ်ခု: အဆိုပါ 21st HPA Tech မှသီးသန့်အဘို့အမှတ်ပုံတင်ခြင်း Now ကိုဖွင့်ပါ